Viên uống thơm cơ thể là gì? Top 4 viên uống tạo mùi thơm cơ thể tốt | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Viên uống thơm cơ thể là gì? Top 4 viên uống tạo mùi thơm cơ thể tốt | Muasalebang in Muasalebang
Iphunga lomzimba liyiphuzu elikhulu lokususa elenza silahlekelwe ukuzethemba lapho sixhumana. Amaphilisi anephunga elimnandi azoba umsindisi ezikhathini lapho ehlangana nomuntu othandile noma uzakwethu ukuze enze isithombe esihle lapho uxoxa. Masifunde ngaleli philisi ngesihloko esingezansi.
1 Liyini iphunga lomzimba? Ingabe kuhle?
2 Izinto okufanele uzazi uma usebenzisa amaphilisi ephunga
2.1 Imibandela yokukhetha imikhiqizo ephephile
2.2 Indlela yokuyisebenzisa ngempumelelo, ngokuphepha nangokunempilo
2.3 Kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenzisa?
2.4 Uma ngingasayisebenzisi, ingabe umzimba wami usanuka kamnandi?
3 Amaphilisi amnandi kakhulu omzimba namuhla
3.1 1. Amathebulethi Aphunga Lomzimba WaseJapane Akhazimulayo Premium
3.2 2. Iphilisi le-Bella Fora elithuthukisa i-hormone
3.3 3. Amaphilisi e-Hebora aziphunga
3.4 4. I-DHC .Amathebulethi Ephunga Lomzimba
Liyini iphunga lomzimba? Ingabe kuhle?
Umzimba wethu unezindlala zokujuluka ezi-2 kanti iphunga elibi ngokuvamile libangelwa izindlala zomjuluko zokuqala, ikakhulukazi uma zisebenza, kuzokwenza umzimba ube nephunga elibi. Amaphilisi ephunga lomzimba enziwe ngamavithamini nama roses anamandla okusiza izindlala zomjuluko ukunciphisa amagciwane ngaleyo ndlela enze iphunga elimnandi lemvelo.
Iningi lemikhiqizo yomlomo eyenza iphunga lomzimba likhishwa ezimbalini ezinephunga elimnandi njenge roses, izimbali ze-cherry, izimbali zesafron, ama-primroses, … namavithamini, ngakho-ke uma isetshenziswa kuphephile kakhulu ukuyisebenzisa. Iphephile futhi iyasebenza ngemva kwe-2-3 kuphela amahora okusebenzisa. Lokhu kubonise ukuthi umugqa wamaphilisi ephunga lomzimba muhle?
Izinto okufanele uzazi uma usebenzisa amaphilisi ephunga
Imibandela yokukhetha imikhiqizo ephephile
Ukuze uthole umkhiqizo ophephile udinga ukuthembela enanini lemibandela efana nale:
Ibhrendi: lezo ezinenani lemikhiqizo ethengiswa kakhulu futhi ezithola izibuyekezo eziningi ezinhle ezivela kumakhasimende zizoba ngcono kunemikhiqizo engenawo amagama amaningi emakethe.
Izithako: khetha imikhiqizo enezithako zemvelo ngokuphelele ukuze ugweme imiphumela emibi ngesikhathi sokusetshenziswa.
Ukugcinwa kwephunga: Umkhiqizo omuhle uzokwazi ukugcina iphunga cishe usuku lonke usebenzisa ithebhulethi engu-1 kuphela.
Indlela yokuyisebenzisa ngempumelelo, ngokuphepha nangokunempilo
Iningi lemikhiqizo emakethe namuhla inezithako zemvelo, ngakho-ke iphephile ukuyisebenzisa, ngaphandle kwemiphumela emibi ethinta impilo. Nokho, leli philisi elenza iphunga elimnandi lidinga ukusetshenziswa njalo futhi ngokuqhubekayo ukuze kwakhe iphunga elihlala isikhathi eside.
Awudingi ukusetha isikhumbuzi sokuphuza ngesikhathi esifanele, kodwa uma uphuma, vele usisebenzise imizuzu engu-30 noma ihora elingu-1 ngaphambi kokuthi umkhiqizo uqale ukusebenza ngokushesha. Usuku ngalunye kufanele luphuze amaphilisi angu-2-3 kuye ngomsebenzi wakho futhi ithebhulethi ngayinye kufanele isetshenziswe amahora angu-4-6 ngokuhlukana.
Sicela usebenzise ngokwenkambo umkhiqizi ayincomile ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu futhi uma kungenzeka, ungagcina ukuphuza nsuku zonke.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenzisa?
Ngokuvamile, amaphilisi e-aromatherapy azoqala ukusebenza ngokushesha ngemva kwemizuzu engaba ngu-30 yokusetshenziswa, kunemikhiqizo ethile ezoba nomthelela omude ngemva kwamahora angu-2-3. Uma isetshenziswe ngendlela efanele, umzimba wakho uyohlale unephunga elimnandi ngaso sonke isikhathi sosuku futhi umkhiqizo usebenza ukuthuthukisa isikhumba sakho kangcono.
Uma ngingasayisebenzisi, ingabe umzimba wami usanuka kamnandi?
Uma ungayisebenzisi njalo, umphumela walesi siphuzo esimnandi ngeke ube njengoba ufuna. Lapho uyeka ukusebenzisa iphilisi ngemva kwesikhashana, umzimba uzosusa zonke izakhi ephilisi futhi umzimba uzolahlekelwa iphunga lawo. Ngakho-ke, kufanele uyisebenzise ngokuvumelana nenkambo enqunyiwe noma uyigcine njalo ukuze uthuthukise ubuhle bakho futhi uqede iphunga emzimbeni wakho.
Amaphilisi amnandi kakhulu omzimba namuhla
1. Amathebulethi Aphunga Lomzimba WaseJapane Akhazimulayo Premium
Amaphilisi e-Premium Brightening Rose Japanese iletha iphunga lomzimba wakho ngendlela “ehehayo” “eyengayo” ngenxa yezithako ezivelele ezivela eDamask rose yaseBulgaria. Ngokuqondile, ngokuthuthuka okuqinile, umkhiqizo uphinde wenze isikhumba sibe mhlophe ngenxa yesithako se-ascorbic acid.
=> Bona ukubuyekezwa kwevidiyo enemininingwane eminingi ka-Sang Nguyen:
Amafutha abalulekile aseBulgaria (Rose canina): Ikhishwe eDamask rose yaseBulgaria, edume ngamaroses ayo. Ngomshini wokumunca ngokushesha, kuzosiza abasebenzisi ukuthi babe nephunga elihehayo futhi baxoshe nezindlala zokujuluka ezingemnandi. (Ku-1 Iphunga lomzimba waseJapan i-Premium Brightening Rose ikhishwa kumacembe e-Damask rose angu-1000).
I-Ascorbic acid (i-Provitamin C): Ikakhulukazi iqukethe u-Vitamin C osiza ukwenza mhlophe, ukhanyise isikhumba futhi usekele i-melasma namabala amnyama. Iningi lemikhiqizo yanamuhla yokuthambisa umzimba ayinawo lo msebenzi.
Izinyosi 15mg: Izithako zemithi yemvelo zinemiphumela ephephile futhi ephumelelayo yokuhlobisa isikhumba njenge-cholesterol egazini, ukukhulula ubuhlungu, ukungatheleleki, ukulwa nokuvuvukala kanye nobuhle besikhumba.
I-Glycerine Fatty Acid Ester 15mg: Isithako esibalulekile emikhiqizweni yobuhle ethambisa kahle futhi athambise isikhumba.
Amafutha E-Olive 155.5mg: kukhishiwe Isihlahla se-Olea europaea sinokusetshenziswa okuhle okufana nalokhu: ukunciphisa imibimbi esikhumbeni, ukuthambisa, ngaphandle kokusiza ukusekela izifo zesisu.
I-Ascorbic Acid – Vitamin E 7.5mg: Isiza ukubambezela i-oxidation, ukuguga kwesikhumba, ukuthuthukisa umswakama wesikhumba nokunwebeka.
Dala iphunga lakho lomzimba nomzimba omnandi
Anti-ukuguga, ukwandisa umswakama isikhumba bushelelezi
Isiza ukukhanyisa isikhumba, isekela ukwelashwa kwe-melasma, ama-freckles
Hlanza amathumbu, usekele ukugaya, usize ukulinganisa ama-hormone kanye nezinduna
Ukuzizwa uma usebenzisa
Kubantu abaneG gene njengami iphunga lomzimba liphezulu kakhulu, noma ngabe liqinile noma lilula, lisenephunga elibi kakhulu, kodwa kusukela ekusebenziseni iphilisi elimnandi lomzimba, konke ukuzethemba kunyamalele, wonke umuntu. Ngazama amaphilisi amaningi ephunga lomzimba njenge-DHC, i-Hebora, wonke ayelungile kodwa lapho ngithola ukuthi le-Japanese Premium Brightening Rose inomsebenzi wokwenza isikhumba sibe mhlophe nokulinganisa ama-hormone kahle, ngashintshela kuyo.
2. Iphilisi le-Bella Fora elithuthukisa i-hormone
UBella Fora wenkampani ye-AFC HD AMS Life Science, edabuka eJapan, uyiphilisi lokuziqhola elikhishwe ku-rose essence eyimfihlo yokusiza amantombazane ukuthi abe ntekenteke futhi ayenge nsuku zonke. .
Ithebhulethi ngayinye yeBella Fora iqukethe izithako ezilandelayo:
I-Premium Damask rose essence icwengisiswe ngokucophelela ukuze ibe nephunga elimnandi elihlukile futhi inamandla aphindwe izikhathi ezi-3 kunamanye ama-rose.
Ikhishwe ku-organic evening primrose essence ukuze kuqinisekiswe okumsulwa nokumsulwa.
I-Vitamin E ikhishwa kuma-alimondi ngaphandle kokusebenzisa noma yiziphi izivimbelakuvunda, ngakho ihlale igcina ubumsulwa bayo.
Umkhiqizo ulungiselelwe ngendlela ye-capsule ethambile ekhishwe ngokuphelele ezitshalweni, ayinayo i-gelatin noma i-preservatives, ngakho-ke ihlakazeka kalula lapho ingena emzimbeni ngemva kwemizuzu engu-10-20 yokusetshenziswa, isiza iphunga ukuba lisakaze esikhumbeni. ama-pores ukuze umzimba ube nephunga elimnandi, isici seDamask rose.
Akugcini nje ngokuletha iphunga lemvelo emzimbeni, kodwa amaphilisi e-Bella Fora nawo anamandla okunciphisa inqubo yokuguga komzimba, ukumelana nomswakama omuhle ukukusiza ukuthi ugcine isikhumba esibushelelezi futhi sigcwele amandla.
Okunye ukusetshenziswa ukuthuthukisa i-endocrine, ukusekela ibhalansi ye-estrogen, efaneleka kakhulu kwabesifazane abakwi-perimenopause.
Ngemuva kwemizuzu engu-20 kuphela yokusetshenziswa, umzimba uba nephunga elimnandi le-rose. Ngokwesingeniso somkhiqizo, ingasetshenziselwa “amantombazane” ngokuphula iphilisi bese igcoba esikhumbeni esibucayi endaweni yangasese, ngemva kwesikhashana ngabona ukuthi isikhumba sasibomvu futhi sinephunga elimnandi.
Umzimba usheshe ukhiphe iphunga elihlanganisa umoya kanye “nentombazane” uma isetshenziswa.
Ngemuva kokusetshenziswa okungu-1, isikhumba sigcwele ubungqabavu, busha kakhulu
Iphunga lihlala isikhathi eside, ngakho-ke ithebhulethi engu-1 kuphela ngosuku yanele
Umsebenzi wokusekela ama-hormone usahamba kancane, kuthatha isikhathi eside ukuthola imiphumela elindelekile.
Kufanele isetshenziswe ngaphambi kokuphuma noma ukuhlangana nozakwethu imizuzu engu-30-60, sebenzisa futhi ngemva kwamahora angu-5-6 usebenzisa iphilisi lokuqala.Nsuku zonke kungcono ukuphuza amaphilisi angu-2-3 futhi ulondoloze ukusetshenziswa okuqhubekayo ukuze kube nephunga elihlala isikhathi eside.
3. Amaphilisi e-Hebora aziphunga
Uma ungezwani namakha kodwa usafuna ukuhogela kahle, khona-ke amaphilisi e-Hebora ephunga elimnandi akhiqizwa inhlangano yase-Japan AFC-HD AMS Life Science ayisixazululo esingcono kakhulu sakho. Ngenxa yemiphumela yocwaningo yochwepheshe abaholayo, umkhiqizo awugcini nje ngokuba nomthelela wephunga elimnandi kodwa futhi unezinye izinzuzo eziningi zomzimba womsebenzisi.
Njengethebhulethi enomsebenzi wokwenza iphunga elimnandi, i-Hebora iqukethe izithako eziyingqikithi yemvelo enephunga elimnandi, elihehayo njenge:
I-Cherry blossom: lolu wuhlobo lwembali emila ngokwemvelo esiqongweni sentaba e-Kamisenbon enekhono elingcono kakhulu lokugcina iphunga elimnandi namuhla.
Amarozi aseDamask angenisiwe evela eBulgaria anephunga elimnandi neliheha kakhulu emhlabeni
I-Evening primrose: inemiphumela eminingi ekulinganisweni kwehomoni kanye nokugcinwa kwehomoni kwabesifazane
I-saffron essence yembali: kule mbali iqukethe i-80% ye-omega-6 esebenza ngempumelelo kakhulu yokulwa nokuguga, ibhalansi kawoyela, …
Ngezithako eziqukethe izithako eziningi ezinamakha emvelo, ithebhulethi ye-Hebora yomlomo isiza ukuvimbela iphunga lomzimba, idale iphunga elimnandi elihehayo, lemvelo nelimnene usuku lonke. Uma kuqhathaniswa nokusebenzisa amakha angaphela ngokushesha noma lapho umjuluko unephunga elibi, usebenzisa lo mkhiqizo umzimba wakho usagcwele iphunga elimnandi ngisho nangemva kokugeza.
I-Hebora nayo inomphumela wokulinganisa ama-hormone kwabesifazane, ukuvimbela ukuguga kwesikhumba nokusekela ukuqedwa kobuthi ukuze isikhumba sakho sibe nephunga elimnandi, elikhanyayo futhi elinempilo.
Kunabaculi abaningi abathembe inketho ukusho iphunga elimnandi lomzimba. Iphunga lithambile kodwa lihlala isikhathi eside, ikakhulukazi uma lisebenza kakhulu, izinga lokushisa lomzimba liphakeme, umzimba uba nephunga elimnandi.
Iphunga limnene, lithambile, liyaheha futhi lingokwemvelo emzimbeni Ikhono lokuhlinzeka ngomswakama omuhle ukwenza isikhumba sithambile, sinciphise nezinduna, sinciphise amabala amnyama.
Uma umsebenzi unamandla, iphunga elimnandi liyaqina.
Abanye abantu abangayinakekeli kahle imizimba yabo noma abanempilo ebuthaka, abahlushwa iphunga langaphansi kwamakhwapha ngeke babe nomphumela oyifunayo.
Kunconywa ukusebenzisa okungenani amabhokisi ama-2 ngonyaka ngokuvama kwamaphilisi angu-1-2 ngosuku cishe imizuzu engama-30 ngaphambi kokulala noma ukusebenzisa ngaphambi kokuhlangana nomlingani. Kulabo abangezwani ne-perfume, ungakwazi ukusika i-capsule ye-Hebora futhi uyisebenzise ezindaweni lapho iphunga lihlala isikhathi eside.
4. I-DHC .Amathebulethi Ephunga Lomzimba
Amaphilisi e-DHC e-rose oil avela e-Japan ayimikhiqizo ejwayelekile kubantu abaningi, ikakhulukazi labo abasebenzisa imikhiqizo ye-DHC njalo. Ngenhlanganisela yezinto ezi-2 ezisebenzayo iGeraniol neCitronellol, izoletha iphunga lemvelo kumsebenzisi, ikwenze uqiniseke ngokwengeziwe lapho ukhuluma.
Ukwakheka kwethebhulethi ngayinye ye-DHC kuqukethe:
Amafutha e-Rose akhishwe kuma-roses aseBulgaria aqukethe izithako eziningi ezisebenzayo i-Geraniol ehlanganiswe ne-Citronellol ku-lemongrass uwoyela obalulekile ukunciphisa iphunga elibangelwa izindlala ze-sebaceous.
Uvithamini E namafutha omnqumo kuletha ikhono elihle lokuswakama emzimbeni
Ngaphezu kwalokho, amaphilisi e-DHC aqukethe nezinye izithako ezifana: I-Carbohydrate, Amaprotheni, Amafutha, I-Sodium Chloride.
I-DHC isebenza ukuvimbela i-oxidation ye-9-Hexadecena acid kanye ne-Lipid Peroxide, okuyizimbangela ezi-2 zephunga elibi lomzimba futhi zidale iphunga elimnandi, elingokwemvelo.
Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo usiza futhi ukuzinzisa ama-hormone kwabesifazane ngesikhathi se-perimenopause. Okunye ukusetshenziswa kwamaphilisi e-DHC ukuhlanza, ukukhipha ubuthi emzimbeni, ukuhlanza umgudu wamathumbu ukusiza izilonda ziphole ngokushesha.
Kubantu abanephunga eliqinile lomzimba njengami uma bekhuthele futhi bejuluka kakhulu, basuke bengazi lutho ngabo. Ngemva kwamaviki angu-2 okusebenzisa amaphilisi e-DHC, iphunga lomzimba liye lehla kakhulu, umoya osemlonyeni unephunga elimnandi kakhulu lerose, okungisiza ukuba ngizethembe ngokwengeziwe lapho ngikhuluma.
Inomphumela wokuqeda iphunga ngokushesha, inika umzimba iphunga elimnandi
Izithako zonke zingokwemvelo, ngakho-ke kuphephile ukuzisebenzisa
Uma kuqhathaniswa neminye imikhiqizo ye-DHC, leli philisi libiza kakhulu.
Sebenzisa i-capsule engu-1 isikhathi ngasinye, sebenzisa amaphilisi ama-2 ngosuku ngemva kokudla ukuze uthole umphumela omuhle kakhulu. Njengoba iphunga lisakazeka ezimbotsheni, sicela uphuze amanzi amaningi.
Nazi ezinye zezabelo zami mayelana namaphilisi ephunga elimnandi lomzimba kanye nokunye ukubuyekezwa okuvela kumakhasimende ngemva kokusebenzisa imikhiqizo yekhwalithi yanamuhla. Sethemba ukuthi lolu lwazi luzokusiza ekukhetheni iphilisi elifanele.
Xem Thêm [Review] Dưỡng mi Eveline có tốt và đáng mua hay không? | Muasalebang
Nồi cơm điện nào tốt nhất 2021? 7+ hãng cơm ngon dẻo 2022 | Muasalebang